पशुपतिनाथ मन्दिरमा भयो यस्तो चमत्कार, अब के हुन्छ ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/पशुपतिनाथ मन्दिरमा भयो यस्तो चमत्कार, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं / पशुपतिनाथ मन्दिरको काठ कुहिएको छ। तीनतले मन्दिरको बीचको तलाका केही काठ कुहिएको हो। आँखीझ्याल अड्याउने फ्रेम कुहिएको हो।
दुई अध्यक्षले नभई सचिवालय बैठकले कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग
तीन महिलासहित ९ संक्रमितको मृत्यु, नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ८० पुग्यो